Malik Yusuf(wiil soomaali ah) oo loo xiray dil uu gaystay 14 sano kahor - NorSom News
14-kii November 2001 laba wiil oo soomaali ah(Malik Yusuf iyo Ali Ahmed Addi) ay ka codsadeen dadkii kale ee kula jiray klasska inay qolka u baneeyaan si ay gooni ugu wada hadlaan. Waxyar kadib ayaa Malik uu sadex toori galiyay Ali Ahmed, taas oo keentay inuu u nafbaxo ugu danbeyntii. Arintan ayaana ka dhacday dugsiga sare ee Nordreisa ee deegaanka Storlett oo ka tirsan gobalka Troms.
Malik oo markaa da’diise ahayd 16 sano ayaa sheegay inuu arimo qabiil darteed noloshiisa uga cabsanayay wiilka uu dilay oo da’ ahaan ka weynaa ku dhawaad labo sano. sidaas darteedna uu ku qasbanaa inuu is difaaco. Sanadkii 2002 dhexdiisa ayay maxkamada aqbashay is difaacii Malik, isla markaana ay ka fasaxday xabsiga. Laakiin dacwad oogayaasha dowlada ayaa arintaas ka biyo diiday, isla markaana qaatay rafcaan, codsanayna in la siiyo fursad ay si dhamaystiran ugu baaraan dhacdadan.
November 2002, Maalmo ka kahor inta ay maxkamadu guda galin racfaanka dacwad oogayaasha dowlada, ayuu Malik ka baxsaday meel ay barnevernku dajiyeen asaga oo markaas da,diisu ahayd 17 sano, wadankana ka baxay. ilaa markaasna booliska ayaa ku raad-joogay.
Isbuucyo kahor ayaa lagu xiray England, loona soo gudbiyay Norwey. Isla markaana la xiray, laguna soo oogay dacwadii uu ka fakaday 14 sano kahor.
Previous articleDowlada Norwey oo 345.8 milyan NOK ugu deeqday Somalia sanadkii 2015.
Next articleSoomaalida oo turjumaan ka dhigato caruurta yar-yar.